Mpivarotra sy mpamatsy takelaka firaketana vita amin'ny varotra mahery vaika China Ruiyi
Ny takelaka alimina modely dia karazana fitaovana vy ihany koa, ary mila arovan'ny fomba siantifika amin'ny asa isan'andro izy io. Eo an-tampon'ny lisitra, ny fanadiovana tsy tapaka, ny tasy amin'ny ety ivelany dia tokony hodiovina amin'ny rano na ilay fanalana tasy mifanaraka aminy. Ny sisan'ireo tasy dia hamorona tsiranoka fotsiny amin'ny famafana ilay ravina.
Famaritana takelaka firaka vita amin'ny alim-bidy mafana
Na dia manana tombony betsaka aza ny mombamomba ny aluminium amin'ny takelaka aluminium, ny vidin'ny profil aluminium dia ambony noho ny vokatra hafa. Ny takelaka vita amin'ny aliminioma dia mora "harafesina" nefa tsy ampidirina amin'ny otrikaina, ka miteraka fihenan'ny fampisehoana ny vokatra, ary ny tanjaka dia ambany noho ny an'ny vokatra vy, ary ny fanoherana entin'ny sosona oksida dia ambany noho ny an'ny plating sosona ary lafo ny vidiny.
Takelaka firaka vita amin'ny firaka aliminioma mahazatra: mety amin'ny tontolo iainana isan'andro, antonony ny vidiny. Matetika ampiasaina amin'ny fitehirizana mangatsiaka, gorodona, fonosana ary toerana hafa.
Platina aliminioma firaka vita amin'ny aliminioma: antsoina hoe lozisialy alim-bolaka harafesina, somary avo kokoa noho ny plastika aliminioma firaka vita amin'ny alimika ny tanjaka, miaraka amin'ny fanoherana ny harafesina, saingy ny fanoherana ny harafesina sy ny hamafin'izy ireo dia ratsy, satria ny lozisialy vita amin'ny alim-bokatra dia ampiasaina amin'ny fiarovana Ny harafesina dia tsy henjana, toy ny maodelin'ny kamio, gorodona fitehirizana mangatsiaka sns.
Platina aliminioma alim-bolo aliminioma: manana hamafiny tsara, fanoherana ny harafesina ary fanoherana ny harafesina. Matetika ampiasaina amin'ny toerana manokana kokoa, toy ny sambo sy tontolo iainana mando, ity takelaka aluminium ity dia manana fahaizana mitondra entana sy hamafin'ny fo.
Teo aloha: Takelaka aluminium lafo amidy 8011
Manaraka: Mpanamboatra takelaka vita amin'ny takelaka vita amin'ny takela-by Premium China
Rust fanoherana tsara alimina Aluminium Checkered Pl ...